लगानीमैत्री वातावरण बनाउँछु « Anumodan National Daily
प्रकाशित मिति : 1 May, 2018
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा तपाईको उम्मेदवारी किन ?
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ नेपालभरी कै उत्कृष्ट उद्योग वाणिज्य संघ बन्न सफल भएको संस्था हो । कैलाली जिल्लाको सदरमुकाम धनगढी सात नम्बर प्रदेशको अस्थायी मुकाम (राजधानी) पनि हो । धनगढी सात नम्बर प्रदेशको व्यावसायिक हव हो । सात नम्बर प्रदेशमा अनगिन्ती सम्भावना छन् । ती सम्भावनाको पहिचान गरी प्रचारप्रचार गर्नु आवश्यक छ । अब समग्र प्रदेशकै सम्बृद्धिका लागि अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अबको कार्यदिशा भनेको यस क्षेत्रमा रहेका विभिन्न स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग एवं परिचालन गरी लगानीमैत्री वातावरणको माध्यमबाट उद्योगधन्दाहरू स्थापना गर्नु हो ।
हजारौं युवा रोजगारीका लागि खाडी मुलुक पलायन भइरहेका छन् । उद्योगधन्दा स्थापना गरी युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । लगानीमैत्री वातावरणका लागि लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षण गर्ने वातावरण बनाउन प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई दवाव दिनु आवश्यक छ । समग्रमा भन्नु पर्दा ‘व्यावसायिक एकता र आर्थिक सम्बृद्धि’ का लागि मेरो उम्मेदवारी हो ।
तपाईंको जित्ने आधार के हो ?
म लामो समयदेखि कैलाली उद्योग वाणिज्य संघमा रहेर काम गर्दै आएको छु । दुई कार्यकाल सदस्य र एक पटक कोषाध्यक्ष पदमा रहेर व्यावसायिक हकहितका लागि आवाज उठाउँदै आएको छु । अहिले म उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष पदको प्रत्यासीका रूपमा अघि बढेको छु । व्यावसायिक साथीहरूले ममाथि ठूलो आशाभरोसा राखेर अध्यक्ष पदमा उठाएका छन् । व्यावसायिक हकहित र यस क्षेत्रको आर्थिक सम्बृद्धिका लागि अहोरात्र खट्ने व्यक्ति म नै हो भनेर व्यावसायिक साथीहरूले भनिरहेका छन् । सरल स्वभाव, मितव्ययी व्यवहार, इमान्दारीमा कटिबद्ध, सक्षम व्यवसायी र कुशल नेतृत्व क्षमता मेरो जित्ने आधार हुन् ।
व्यवसायीहरूले तपाईलाई नै किन अध्यक्षमा निर्वाचित गर्ने ?
म लामो समयदेखि कैलाली उद्योग वाणिज्य संघमा रहेर व्यावसायिक हकहितका लागि लागेको व्यक्ति हुँ । मैले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म व्यावसायिक हकहितका लागि आवाज उठाएको छु । नेतृत्वमा रहेर काम गर्ने इच्छा छ । व्यावसायिक साथीहरूको साथ, सहयोग र समर्थनले मलाई कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गर्नेछन् । यसमा द्विविधा छैन ।
तपाईका चुनावी ऐजेण्डा के के हुन् ?
चुनावी एजेण्डा थुप्रै छन् । यो प्रदेश भारत र चीनसँग जोडिएको छ । भारतसँग जोडिएको गौरीफण्टा नाका र बझाङको चैनपुर हुँदै चीनसँग जोड्ने ताक्लाकोट नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा स्थापना गर्न पहल गर्ने, एक स्थानीय तह, एक उत्पादन क्षेत्र लगायतका अवधारणा लागू गराउन पहल गर्ने, कर, भन्सार, बिमा, बैंकिड्ड र सुरक्षा जस्ता विषयमा छुट तथा सुविधाको लागि पहल गर्ने, प्रदेश आर्थिक क्षेत्र स्थापना तथा विशेष औद्योगिक प्याकेज घोषणा गर्न पहल गर्ने, व्यावसायीको पिरमर्का समस्या बुझ्न मासिक भेटघाट गर्ने, फाप्ला क्रिकेट मैदान, सेती लोकमार्ग, खुटिया–दिपायल फाष्ट ट्रयाक, गेटा विमानस्थल जस्ता पूर्वाधारका लागि पहल गर्ने, फोहोर व्यवस्थापनका लागि सहकार्य गर्ने, बजार क्षेत्रमा सडक बत्ती, सिसिटिभी जडानका लागि पहल गर्ने लगायतका थुप्रै चुनावी एजेण्डा छन् ।
नेतृत्वमा रहेर काम गर्ने इच्छा छ । व्यावसायिक साथीहरूको साथ, सहयोग र समर्थनले मलाई कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गर्नेछन् । यसमा द्विविधा छैन ।
उद्योग वाणिज्य संघमा गैरव्यावसायीहरू हावी भएको अवस्थामा यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नु हुन्छ ?
उद्योग वाणिज्य संघको वर्तमान विधानलाई समायानुकुल आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ । प्यान, भ्याट नलिएका तथा हाल विकृतिको रूपमा रहेका गैरसदस्यहरूलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्ने छु ।
यही बैशाख २२ गते कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको ४६ औं साधारणसभा तथा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचन हर्ष र उत्साहका साथ सहभागी भई पुष्पराज कुँवर नेतृत्वको प्यानललाई व्यावसायिक एकता र आर्थिक समृद्धिका लागि सम्पूर्ण व्यावसायीज्यूले हातेमालो गर्दै अत्याधिक मत दिई विजयी गराई दिनहुन हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु ।
प्रस्तुति : मीन ठकुरी